Ahoana ny fametrahana horonan-tsary ao amin'ny PowerPoint anao, tsikelikely | Famoronana an-tserasera
Microsoft PowerPoint dia programa faran'izay tsara feno mety be inona ny hevitrao fampisehoana mamorona, hita maso ary tena matihanina Zahao amin'ny alàlan'ity rohy ity!. Indraindray, izahay te hanampy video amin'ny fampahalalana azonay amin'ny sary mihetsika sy ny fivoahana ny programa hilalaovana an'io amin'ny solosaina. Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fametrahana horonantsary ao amin'ny PowerPoint anao ary asehonay anao safidy hafa amin'izay ianao afaka misafidy izay ahazoana aina indrindra ho anao.
1 Misy safidy roa hametrahana horonantsary ao amin'ny PowerPoint
2 Ahoana ny fametrahana horonan-tsary amin'ny Internet ao amin'ny PowerPoint anao
2.1 Amin'ny inona ny kinovan'ny PowerPoint afaka anaovako manao izany?
2.2 Ny horonantsary YouTube ihany ve no azoko ampidirina amin'ny PowerPoint?
3 Ahoana ny fomba fametrahana horonantsary tahiry ao amin'ny PowerPoint anao
3.1 Inona ireo endrika video azoko ampiana amin'ny PowerPoint-ko?
Misy safidy roa hametrahana horonantsary ao amin'ny PowerPoint
Ao amin'ny PowerPoint azonao atao ny mampiditra horonan-tsary avy amin'ny tamba-jotra (Youtube, Vimeo ...) sy horonan-tsary azonao alaina ao amin'ny arisivanao (tompony na alaina taloha). Hanampiana horonan-tsary, tsy maintsy mandeha amin'ny sisin-tsolika ianao ary kitiho ny «video», hanome anao safidy telo izy ireo: ny roa voalohany izay aseho amin'ny sary etsy ambony dia ampiasaina hampidirina horonan-tsary avy amin'ny rakitrao, ny farany dia ny manampy horonantsary an-tserasera.
Ahoana ny fametrahana horonan-tsary amin'ny Internet ao amin'ny PowerPoint anao
Para mampiditra horonan-tsary avy amin'ny tamba-jotra, ohatra avy amin'ny Youtube, mandehana any amin'ny takelaka ampidiro, tsindrio ny horonan-tsary ary safidio ny "sarimihetsika an-tserasera". Hisokatra ho azy ny varavarankely izay ahafahanao miditra ao amin'ny URL. Mila mandeha Youtube fotsiny ianao, mitady ilay horonan-tsary tadiavinao, adikao ny url ary apetaho amin'ny toerana voatondro izany. Rehefa vitanao dia tsindrio ny insert.
Hiseho eo amin'ny efijery ilay horonan-tsary, afaka manova azy ianao mba hifanaraka tsara kokoa amin'ilay habaka noforoninao ary raha manome ianao "Endrika video" azonao atao aza ny manova ny bika aman'endriny (manandrama manampy frame aminy). Ao amin'ny «Filalaovana» ​​kiheba Azonao atao ny mametraka azy hilalao mandeha ho azy rehefa mandalo ilay slide ianao, rehefa manindry ianao na, raha tianao, amin'ny teboka hafa amin'ilay slide.
Amin'ny inona ny kinovan'ny PowerPoint afaka anaovako manao izany?
Saika ny kinova farany an'ny PowerPoint mamela anao hanampy horonan-tsary YouTube ny kinova an-tserasera PowerPoint manome an'io fahafaha-manao io. Mampalahelo fa matetika io fika io dia tsy mandeha amin'ny kinova 2007 sy 2010, na ny 2011 sy 2016 an'ny Mac.
Ny horonantsary YouTube ihany ve no azoko ampidirina amin'ny PowerPoint?
ihany koa azonao atao ny mampiditra horonantsary Vimeo, tsy manome olana matetika izany. Mazava ho azy, rehefa manampy horonan-tsary avy amin'ny tamba-jotra ianao dia alao antoka fa manana izany ianao fifandraisana Internet rehefa eo hahafahana mamerina azy ireo.
Ahoana ny fomba fametrahana horonantsary tahiry ao amin'ny PowerPoint anao
Hanampy horonan-tsary mankanesa any amin'ny tabilao "insert", kitiho ny "video", kitiho ny "film from a file", ary azonao atao izao ny misafidy izay tianao. Toy ny tamin'ny tranga teo aloha, azonao atao ny manova ny refy ary ny fomba fiterahana, azonao atao aza ny manampy fade-in na fade-out.
Inona ireo endrika video azoko ampiana amin'ny PowerPoint-ko?
Rehefa mampiditra horonan-tsary avy ao anaty rakitra ao anaty PowerPoint ianao zava-dehibe ny fiheveranao ny endrika amin'ny horonantsary satria io ihany no mety hanome anao olana. Ao amin'ny latabatra izay miseho amin'ny sary etsy ambony dia namintina ny endrika natolotry ny Microsoft. Ny sasany mety tsy toa anao, fa aza manahy fa mila mitady mpanova ianao (misy an-tserasera ary mety ho anao koa ny VCL) ary mifantina ny sasany amin'ireo endrika ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fametrahana horonan-tsary ao amin'ny PowerPoint anao